The 10 Best Electric Bikes Na 2020 | ebike Shuangye
Mbido Nnukwu ọkụ eletrik 10 kachasị mma na 2020
Shuangye bụ 12 afọ OEM & ODM eletriki igwe eletriki igwe eletriki igwe eletrik, nwere ike ịme oke moto, ikike batrị, logo, ngwugwu (ect.) Dịka ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Nke a ga-akwado 10 igwe eletriki kachasị mma na 2020.
Ugwu igwe eletriki igwe A6AH26
A6AH26 Ihe nlere bu otu n’ime ire ere igwe eletriki igwe eletrik, ma o bu nke kachasi nma n’etiti ndi n’agba igwe. Enwere inch 26, 27.5 nke anụ ọhịa na 29 nke anụ ọhịa ịnyịnya ígwè na rim ịhọrọ. Enwere igwe na-enweghị ọsọ na igwe eletriki eletrik a, ị nwere ike ịhọrọ 250W / 350W / 500W / 750W moto moto, wee rute 25-40km / h max ọsọ. Ọ na-abịa na batrị lithium 36V ma ọ bụ 48V nke ezubere iji kwụsị, yana otu ụgwọ, ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịnụ ụtọ 40-60km n'otu ụgwọ, ma na-ebu ibu ruru 150kg n'otu oge. Eke a na-abịa na sistemụ ọsọ ọsọ 21, enwerekwa ọsọ 7/27 ọ nwere ụzọ atọ: ịnyịnya aka enyere, e-igwe kwụ otu ebe na pedal - nhọrọ bụ nke gị!
City eletriki igwe A5AH26
A5AH26 bụ ihe dị mfe, dị mma, ma dịkwa ọnụ ala, igwe eletriki eletrik nke obodo na-abịa n'otu nha 26 inch (ma ọ bụ 28 inch), agba abụọ (White na Black), nwere stem heigh na-agbanwe agbanwe na arụmọrụ mgbagha njem njem 100mm. ya na imechi mkpọchi Dị njikere maka ụdị ụdị ịnya ụgbọ elu yana ngwa niile nwere fụnọkụmentị plastik zuru ezu, 3W n'ihu ọkụ ya na ọdụ ọdụ USB, KENDA taya, brake 160mm diski. Ejiri 350 watt-braless hub-motor arụ ọrụ n'azụ wiil paored na batrị lithium 36v 10ah maka ogologo agba, enyemaka pedal na ọnọdụ ihie, mee ka ị dị mfe. (Also nwekwara ike ịhọrọ batrị 250w / 500w / 750w na batrị 36v 8ah / 13ah, 48v 8ah / 10ah / 13ah / 15ah)
Fat taya eletriki igwe A6AH26F
A6AH26F bụ igwe kwụ otu ebe igwe eletriki dị mma maka ọtụtụ ebumnuche, na 26 * 4.0 taya na-egbochi skidding taya na-enye traction na ise n'elu maka ịgba ịnyịnya n'ụzọ na-adịghị mfe, ma na-emegharị ngwa ngwa na snow, ájá, gravel na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ topography. Enwere ụdị parameter nke moto eletriki na batrị ịchọrọ ịhọrọ dabere na ịchọrọ, enwere 36v 250w / 350w / 500w, 48v 500w / 750w / 1000w, 60v 750w ብሩ na-enweghị isi, yana 36v 10ah, 48v 10ah / 13ah / 15ah / 20ah, 60v 13ah / 13.6ah batrị. Maka ụdịrị moto ndị a, ọbụlagodi steepụ ga-abụ oke ikuku, batrị nchaji na-enye ihe ruru 40-60km nke ịkwọ eletriki ọ bụla. Ngosiputa LCD buru ibu na-eme ka mmadu mara ihe omuma a-nke oma.
Mpempe igwe eletriki igwe A1-7
A1-7 nwere ike ịbụ igwe eletriki elekere 20 nke a pụrụ ịtụkwasị obi maka ịgbagharị na-arụ ọrụ, ma ọ bụ okpukpu atọ okpukpu atọ n'ime akpati ụgbọ ala gị maka ịgagharị n'okporo ụzọ. Ejikọtara igwe kwụ otu ebe a na njikere ịga, mana ọ na-adị mfe maka nchekwa nchekwa, ọ na-eme ka ọ dị mfe iji ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma nwere oche na ntinye aka iji kwado ọtụtụ nha. A na-akwado ya site na 250w ma ọ bụ 350w nke na-enweghị brush, ihe kachasị dị na 30N.m ma ọ bụ 35N.m, nwere ike itinye aka ma ọ bụ site na ihe mmetụta mmetụta maka nkwado nke dabeere na nkwado ma ọ bụ na-akpalite trotul, nwere ike ịgba ọsọ ruo 25-30km / h, na ọnọdụ eletriki dị ọcha ma kwadoro ya site na batrị zoro ezo 36v 8ah / 10ah. Egwuregwu a nwere ike ịnweta 500w moto na batrị 36v 13.6ah.
Urban igwe eletriki igwe A5AH24
A5AH24 bụ ebi nke anụ ọhịa 24 na-eji plastik na azụ azụ, ọ dị na nhọrọ agba abụọ (White na Black). Enwere oke ọsọ dị ebe a ruo 25-35km / h nwere batrị 36v 250w / 350w n'azụ na-enweghị bọmbụ-moto na egwuregwu a batrị zoro ezo nke 36v 10ah nke nwere ike ịdịru 40-80 km. Ọ dị oke nfe, na-abịa na ọnụahịa dị ọnụ ala - mgbanwe dị mma site na e-igwe ndị ọzọ. Enwere ezigbo uru enyere ihe dị elu: 3W LED n'ihu ọkụ nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB, ngosipụta LCD na-egbochi mmiri, F / R: V-brake (F: V-brake / R: brake eletriki nwere mkpọchi moto). Threezọ atọ dị iche iche na-arụ ọrụ, na-enyere aka, pedal na e-igwe, ma ị nwere ike ịgbanwee ngwa ngwa n'etiti atọ ahụ.
Ugwu igwe eletriki igwe A6AB26
A6AB26 bụ otu n'ime ụgbọ e-kacha mma e nwere maka ndị okenye nọ n’ahịa a na-azụ ahịa, ụdị igwe eji ewu mmiri e ji eme njem ugwu, nke e jiri 6061y26 alloy alloy mee igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe na-abịa n’ike. Enwere 27.5 inch, 29 inch na 160 inch na wheel rim. Ptmalite taya taya ugwu siri ike ma na-eme ihe ike, na-agbakwunye nkasi obi n'okirikiri okporo ụzọ. TEKTRO 7mm mechincial disc breeki, shimano 9/21/27/25 ọsọ. Uzo dị elu nke 35-250km / h na 500w-XNUMXw brushless hub-moto na-eme ka igwe eletrik a bara uru inwe ma ị nọ n'okporo ụzọ ma ọ bụ ụzọ. Igwe igwe kwụ otu ebe nwere mgbịrịgba na isi isi LED nke na-enwu ọkụ nke ukwuu, nke a zuru oke maka ịnya igwe n'abalị.
Mpempe igwe elekere igwe eletriki igwe mpako A7AM20
A7AM20 bụ mpịọkụ 20 inch nke ike taya elekere eletriki ya na igwe anaghị agba nchara, igbe azụ, 3W LED n'ihu ọkụ na ọdụ ụgbọ USB, n'etiti ọdụ ụgbọ USB na-enye gị ohere ịnabata ma ọ bụ jigide eletrọniki eletrọniki mgbe ị na-agba ma ọ bụ na-akwụsị. Enwere batrị lithium 36v / 48v 10ah / 13ah / 15ah, enwere ike ịpụga ya ebe enwere ọpụpụ ụgwọ, 36v / 48v 250w / 350w / 500w / 750w brush na-enweghị isi nwere ike ịhọrọ. Ezigbo usoro ọsọ ọsọ 7-ọsọ nwere nnukwu ihe ngosi LCD na sọlfọ. Idobe igwe kwụ otu ebe ka ịchekwa ma ọ bụ tinye n’ime akpati ụgbọ ala chọrọ usoro atọ, dị nfe na ngwa ngwa.
Egwuregwu igwe kwụ otu ebe dị elu A7AT26
A7AT26 abịa na nkwalite nke ọgbọ nke atọ, nke ejiri 6061 alloy rụọ ọrụ, na-egosipụta ihe dị mma 26 * 4 nke anụ ọhịa KENDA nwere nchebe nchebe na nkwụsị dị ala. Ọ kwụsiri ike ma nwee ike na ala dị nro dị ka mulch na ájá ma ọ bụrụ na e wedata nrụgide ikuku taya. Ike dị elu bụ ihe kachasị mkpa, nabata 48v 750w / 1000w, 60v 2000w brushless motor nke na-enye ohere maka ọsọ ọsọ nke 55-60 km / h na 48v / 60v 18ah / 20ah nnukwu batrị. 180mm n'ibu diski breeki rotors enye magburu onwe ịkwụsị ike na njikwa, nkwusioru n'ihu ndụdụ, shimano 21 ọsọ, na mas ibu bụ 200kgs. A isi mkpịsị aka trotul overrides pedal aka mgbe niile maka mfe mmalite na ụma ike mgbe ọ dị mkpa.
Classical obodo eletriki igwe A3AL24
A3AL24 eji mara mma kpochapụwo obodo imezi imewe, a ala electric bike na dị na atọ etiti nha (24 anụ ọhịa ahụ, 26 anụ ọhịa ahụ na 28 nke anụ ọhịa ahụ) na abụọ ọkọlọtọ agba nhọrọ (White na Black). Ọzọkwa na inogide plastic fenders, nchara ogbe, 3w fornt ìhè and1 / 7 ọsọ. Vkreki na-enye ike braking zuru ezu mgbe ịkwụsị. 24v / 36v 8ah / 10ah batrị nwere ụdị abụọ ịhọrọ, otu zoro ezo, onye ọzọ bụ igbe azụ. 25-32km / h ọsọ ọsọ ọsọ na igwe 250w brushless bụ nhọrọ dị ukwuu maka ịga njem. Igwe eletrik a bụkwa nke ọnụ ala dị ọnụ ala.
Fat taya eletriki igwe A6AH20F
A6AH20F bụ otu na-abịa na abụba taya ndị zuru oke maka ụzọ ụkwụ n'okporo ụzọ. Ọ bụ otu n’ime igwe kwụ otu ebe kachasị ọhụrụ nke Shuangye, ma nwee atụmatụ maka ụmụ nwanyị, ndị na-agba obere ịnyịnya. Ejiri 100% alloy igwe kwụ otu ebe mee ya, batrị ahụ dị nke ọma na obere ala ala ma ọ bụ batrị na-ewepu ya, yabụ ị nwere ike ịkwaga ya ka ị kwụọ ụgwọ ebe ị ga-aga. E nwere nkwusioru n'ihu ndụdụ a nlereanya, otú taya na ndụdụ ma ike banye ujo. Enwere ikike nke oke moto na ikike batrị, dị ka 36v 10ah / 13.6ah, 48v 10ah / 13ah ike batrị yana 36v 250w / 350w / 500w, 48v 500w / 750w moto.
Ọ bụrụ na inwere mmasị na ozi igwe kwụ otu ebe, biko gaa na Ụlọ Ọrụ Weebụ ma ọ bụ hapụ ozi gị n’okpuru.